JINGHPAW KASA: ဗိုလ်ချုပ်မြင့်စိုးစကားပြန်ပြင်ပြောပါ
နိုဝင်ဘာလ (5) ၇က်နေ့ VOAနဲ့ မေးမြန်းခန်းမှာ ပြောသွားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ရေး၊ မပြင်ရေးဟာ တိုင်းရင်းသားများနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ပြောသွားခြင်း၏ အဓိပါယ်သည် 2008 ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် တိုင်းရင်းသားများနဲ့ လုံးဝမဆိုင်ပါ၊ တိုင်းရင်းသားများ လိုက်နားစရာလည်းမလိုပါဟု အဓိပါယ်ထွက်နေပါသည်။ အမှန်တကယ်လည်း တိုင်းရင်းသားများရဲ့အရေး ဘာမှအားမခံချက်မပါတဲ့စာအုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက် တိုင်းရင်းသား များနဲ့ ဘာမှမဆိုင်တာအမှန်ပါ။ တဆက်ထဲမှာ အခြေခံဥပဒေဟာ လွှတ်တော်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်လို့ ပြောသွားပါ တယ်၊ ဒါဟာလည်း လွှတ်တော်ဟာ တိုင်းရင်းသားများနဲ့ လုံးဝမဆိုင်ပါဟု အဓိပါယ်ထွက်နေပါသည်။
There is no different between bull and Burma military (generals.)..
As the Burmese fucking guys say, I would say something here, The Kachin State is not concerned with any Burmese fucking guys. If you want to come our Kachin land, we say sorry for that, please take care of yourself and know yourself that
today Burma boarder is not the Burmese Emperor as your book, the book of your fucking Burmese idiots
What the hell is you fucking guys talking now, be careful, Be gentleman, if not so, the Kachin State will be the foreign country for your Burmese guys, know yourself that the Kachin land is nota"province", it's state and you have to know it has the own sovereignty if the Panglong constitution or the Panglong Agreement had gone, and you should know that your 2008 junta constitution is not invalid or ilegel.